အရင်ဆံုး ဒီမှာ မိတ်ဆက်ပါ ! | WordPress.org မြန်မာ | Burmese
Support » ေတွ့ဆံုပွဲ » အရင်ဆံုး ဒီမှာ မိတ်ဆက်ပါ !
အရင်ဆံုး ဒီမှာ မိတ်ဆက်ပါ !
Moderator Sithu Thwin
10 years,3months ကတည်းက
ဖိုရမ်ကို လာေရာက်ြကတဲ့ WordPress စိတ်ဝင်စားသူများအားလံုး ဒီမှာ ကိုယ့်ကိုယ်မိတ်ဆက်ေပးြကပါ။ ေနာက် ဖိုရမ်ကို ပါဝင် ကူညီလိုသူအားလံုးလည်း ဒီမှာပဲ မိတ်ဆက်ြပီး ကိုယ်ဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို အသိေပးေစလိုပါတယ်။ ဒါမှ ဖိုရမ်မှာ ဘယ်အဆင့် ေပးထားရမယ်ဆိုတာကို ဆံုးြဖတ်နိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ဖိုရမ်မှာက တကယ်တမ်း အသံုးြပုခွင့် ရရှိတဲ့ ရာထူးအဆင့်က သံုးဆင့်ပဲရှိပါတယ်။ (အဖွဲ့ဝင်၊ စိစစ်ကွပ်ကဲေရးသမား၊ နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်သူ) တို့ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်က စီမံအုပ်ချုပ်သူ ရာထူးြဖစ်ြပီး ကျန်တဲ့သူေတွက စိစစ်ကွပ်ကဲေရးသမားများ ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အထက်မှာ WordPress.org က လူတစ်ေယာက်ရှိြပီး သူကေတာ့ ဖိုရမ်တစ်ခုလံုးကို အြပည့်အဝ ထိန်းချုပ်ခွင့်ရတဲ့သူြဖစ်ပါတယ်။ ဘာသာြပန်ဖိုင်အသစ်ြပင်တာတို့လို ကိစ္စများကို ကျွန်ေတာ်က သူဆီကို တဆင့်ေတာင်းဆိုမှ သူတို့က လုပ်ေပးတာြဖစ်ပါတယ်။ ဖိုရမ်မှာ ကျွန်ေတာ် ထိန်းချုပ်ခွင့်ရတာက ဖိုရမ် ေဆွးေနွးခန်း အသစ်ေတွဖွင့်တာ ဖျက်တာ ြပင်တာ စတဲ့ ကိစ္စေတွကိုပဲ ထိန်းချုပ်ခွင့်ရှိပါတယ် သံုးသူေတွ အဖွဲ့ဝင်ေတွကို မှတ်ပံုတင်ကေနဖျက်ပစ်တာမျိုး လုပ်ခွင့်မရှိပါဘူး ဖိုရမ်ကို ေပးမဝင်တာမျိုးပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ဒါေတွကို ရှင်းြပထားတာက ကျွန်ေတာ်က ဒီဖိုရမ်မှာ ရာထူးအြကီးဆံုးဆိုေပးမယ့် ကျွန်ေတာ့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ေတွကလည်း ကန့်သတ်ချက်ေတွ ရှိတယ်ဆိုတာကို ဖိုရမ်လာေရာက်ြကတဲ့ အဖွဲ့ဝင်ေတွကို သိထားေစချင်လို့ပါ။
ကျွန်​ေတာ်​နာ​မည်​ ​ေမာင်ဥ​ဂ္ဂါ​ ​ပါ​ ​လူ​မှု​ဖွံ​ြဖိုး​​ေရး​လုပ်​သား​တစ်ဦး​ပါ​ ​ဗု​ဒ္ဒ​ဘာ​သာ​ ​လူ​မှု​ေရး​အ​ဖွဲ့​တစ်​ခု​နဲ့​​ ​အ​တူ​အ​လုပ်​လုပ်​ေန​ပါ​တယ်​။​​ ​ဘ​ေလာ့​ကို​ ​၂၀၀၈​ ​ခု​နှစ်​ေလာက်​မှာ​ ​စ​ေရး​တယ်​။​​ ​
ဘ​ေလာ့​စ​ေရး​တုန်း​က​ ​ဘ​ေလာ့​ဂါ​နဲ့​​ ​ေနာက်​ ​ဘ​ေလာ့​ဂါ​ ​ဘန်း​ခံ​ရ​ေတာ့​​ ​မာ​တီ​ ​နဲ့​​ေရး​ြဖစ်​တယ်​ ​ေနာက်​ ဝက်​ပ​ရက်စ်​ ​ေရး​ခဲ့​သ​မျှ​ ​ဘ​ေလာ့​​ ​ပ​လက်​ေဖာင်း​​ေတွ​မှာ​ ​ဝက်​ပ​ရက်​ကို​ ​အ​ြကိုက်​ဆံုး​ပဲ​ ​ကူ​ညီ​နိုင်​တာ​ေတာ့​​ ​ဝက်​ပ​ရက်စ်​ ​အ​ေြကာင်း​​ေရး​ထား​တဲ့​​ ​ဘ​ေလာ့​​ေတွ​ ဆိုဒ်​ေတွ​ ​က​ ​ဟာ​ကို​ ဧ​ရာ​ဖိုင့်​​ေြပာင်း​ြပီး​​ ​တက်နိုင်​သ​မျှ​ ​တင်​ေပး​ပါ​မယ်
​ကျွန်​ေတာ်​ ​ဆိုဒ်​က​ http://ogga.myanmapress.com​ ပါ
I cannot type Ayar Font. I want to type but I can’t. If anybody can tell me clearly and properly, tell me urgent.. please…
The topic ‘အရင်ဆံုး ဒီမှာ မိတ်ဆက်ပါ !’ is closed to new replies.
Last reply from: bloggerzox
Last activity: 10 years,3months ကတည်းက
တံု့ြပန်မှု မရှိေသာ ေဆွးေနွးချက်များ